အသက် ၂၆ ရက် - ရက်ပေါင်း ၉၀ ရက် hardmode: အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များ - Your Brain On Porn
အသက် ၂၆ ရက်မှရက်ပေါင်း ၉၀ ရက်အတွင်း hardmode: အံ့မခန်းဖွယ်ရလဒ်များ
WOW - ငါတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါနောက်ဆုံးသုံးလအတွင်း PMO'd ကြပြီမဟုတ် legit ။
ဒါကရှည်လျားတဲ့ post ဖြစ်နိုင်တယ် - ငါကတခြားသူတွေအတွက်လမ်းညွှန်အလင်းအဖြစ်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ကုထုံးအဖြစ်ရေးသားဖို့ငါရေးနေတယ်။ ငါတကယ်ဒီညလုပ်ဖို့အလုပ်တခုရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကိုငါဝေမျှဖို့အရေးကြီးတယ် ငါခံစားခဲ့ရသောအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အဆုံးသို့ကျော်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုရေးပါတော့မည်။
ငါ ၂၆ / မီတာပါ။
ငါဒီခရီးကိုငါဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲဆိုတာမသိဘူး ရက် ၃၀၊ ၆၀ နှင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ၏အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့ပြီး YBOP စစ်ဆေးခြင်းနှင့် TED ၏ဟောပြောချက်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ TED ဟောပြောချက်ကကျွန်တော့်ရဲ့နိဒါန်းဖြစ်ပြီးဒါတွေအားလုံးကိုငါဘာစိတ်ဝင်စားစေခဲ့တာလဲ။
အစမှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည် 'စွဲလမ်းသူ' ဟုတ် / မဟုတ်ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားလိုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုစကားလုံးနှင့်ဆက်စပ်မှုအမြောက်အများရှိခြင်းကြောင့်လူများကိုစတင်ရန် (အစတွင်ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်) အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိသည် -“ ငါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းနေတဲ့ဒီ wackos တွေထဲကတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ငါအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်ညနက်ပိုင်းမှာအင်တာနက်ပေါ်ကအရာတွေကိုကြည့်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေလိုပဲပျင်းရင်တစ်ခါတလေပေါ့။ ” အဲဒီအတွေးအခေါ်နဲ့တောင်မှငါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီစူပါပါဝါတွေဟာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးတစ်ကိုယ်ရေဘဝမှာခဏနေခဲ့ရတယ်။ ဘာလို့ရိုက်ရတာလဲလို့မထင်ချင်ဘူး၊
ဒါနဲ့ငါစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါပျက်ကွက်။ ၃ ရက်ကြာပြီးနောက် - ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်။ ငါရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်နောက်တဖန်စတင်, တဖန်မအောင်မြင်။ နောက်တစ်ခါထပ် လုပ်၍ မရပါ ဒါကကျွန်တော့်ကိုကြောက်စေခဲ့တယ် အခုတော့ငါတကယ်တွေးမိလာတယ် ... shit ... ဒါကတကယ်တော့ပြproblemနာလား ?? ငါကအမေရိကရှိအယောက် ၂၀ ရှိသောလူတစ်ယောက်အတွက်တစ်ပတ်လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ် PMO သို့ပုံမှန်ကျန်းမာသောအပြုအမူဟုထင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါကနုတ်ထွက်ဖို့ပြန်ကြိုးစားပြီးပြန်စတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ငါဟာဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကငါ့ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတာကိုမုန်းတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ဒီအမုန်းကိုသုံးပြီးဒီကိုဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ ငါနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွမ်းကျင်လာတယ်၊
ငါကဒီမှာတစ်ဘုံအထငျမှားသည်ထင်ရာငါသီးသန့် NoFap ကြောင့်မဟုတ်ပါဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်အများအပြားရာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတန်ချိန်, ကြုံတွေ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့် NoFap အကျိုးကျေးဇူးများကိုသို့ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီအခြားအပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုတစည်းဖို့ Catalyst အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ထင်ပါတယ်။
စွမ်းအင်တိုးလာခြင်း - ငါအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုလုံးကိုခံစားရတယ်။ ငါကပိုပြီးစွမ်းအင်နှင့်အတူနံနက်ယံ၌နှိုးနှင့်လုံးလုံးမောမဟုတ်, စိတ်ကျေနပ်မှုခံစားတစ်နေ့တာအဆုံးသတ်။
နက်ရှိုင်းသောအသံ - ကျိန်းသေသိသာပြီးအများကြီးတန်ဖိုးထား။ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းတွင်အလုပ်ခွင်၌လူသစ်များနှင့်စကားပြောလေ့ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းမဖြစ်သည်ဟုများသောအားဖြင့်သူတို့ကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အချို့သူများအတွက်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ဟုထင်ရသော်လည်းသင်၏ကျားမဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါမှားယွင်းစွာသုံးသပ်မိသည့်အခါသင့်ကို ၀ န်ခံပါသည်။ ဤသည်မှာလုံးဝပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ဒါကထူးဆန်းတဲ့စမ်းသပ်မှုပဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒီကိုစပြီးကတည်းကလူတိုင်းကငါ့ကိုဖုန်းပြောနေကြတယ်။
ယုံကြည်မှု - ကျိန်းသေပိုမိုမြင့်မား။ ငါဟာလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ တကယ်တော့ငါဟာအမြဲတမ်းလူမှုရေးအရအမြဲဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကယုံကြည်မှုနဲ့မတူဘူး။ ငါအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးအခုအတွင်းစိတ်ကပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်လျှောက်လှမ်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ အချို့ကဤ 'swagger' ဟုခေါ်နိုင်သည်။ ငါကလူတွေကိုမျက်စိထဲမှာပိုပြီးကြည့်တယ်၊ ငါနေရာတွေရဖို့ငါကြိုးစားနေသည့်အခါလူတွေကငါ့လမ်းထဲကနေပြောင်းရွှေ့။ ကောင်းတယ်
အလုပ်နှင့်ကျောင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်း - ကျွန်ုပ်တွင်အချိန်ပြည့်အလုပ်တစ်ခုရှိပြီးညအချိန်တွင်ကျောင်းသို့တက်ရောက်သည်။ အလုပ်မှာတာ ၀ န်တွေအများကြီးပေးတယ်၊ အစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နေ့တာမှာပိုပြီးအလုပ်များတာ၊ ငါဖြစ်ကောင်းမကြာမီရာထူးတိုးလာပြီပေါ့။ ငါသည်လည်းစာသင်ခန်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီးဟောပြောချက်များနှင့်လည်းလိုက်ဖက်သည်။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝကိုအကြီးအကျယ်အပြုသဘောဆောင်စေခဲ့တယ်။
ငါ့ဥယျာဉ်ကိုပြုပြင်ဖို့ - ပြီးပြည့်စုံသောမိန်းမသည်ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့သောဖမ်းဆီးခြင်းခံရချိန်မှစပြီးအပြာရောင်မှငါ့ထံသို့လာလိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားခဲ့သည်။ အခုတော့ငါမိန်းမတွေမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလာတယ်။ သူတို့ကအကောင်းဆုံးပေးမယ့်သူကိုရွေးမယ်။ ဒါကငါ့ကိုစဉ်းစားစေတယ် ... ငါဘာကမ်းလှမ်းဖို့ရတယ်? ဒီအတွေးကကျွန်တော့်ကိုအလုပ်နဲ့ကျောင်းမှာပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်စေဖို့၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ၀ ါသနာအသစ်တွေ (ဓာတ်ပုံလိုမျိုး) ယူပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံလောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်…မင်းဟာမင်းမိန်းမတွေအတွက်မင်းကိုမပြောင်းတော့ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာလူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်ငါ့ထံချဉ်းကပ်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ဆီကတိုးတက်မှုတွေကိုတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့ Epiphany တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ အတူတူနေခြင်းကဘဝကိုပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသည်။ ငါဒီမှာဖတ်တဲ့ကိုးကားချက်ကတကယ်တော့ကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး…” လိပ်ပြာတွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့။ သင်၏ဥယျာဉ်ကိုပြုပြင်လော့။ ငါတကယ်ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုသွားစဉ် ... ဒါကအမှန်ပဲ။ သူမသည်စူပါဖော်ရွေများနှင့်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါ (ကျွန်ုပ်တို့သူငယ်ချင်းများဖြစ်နေဆဲ)၊ Pre-NoFap ငါ့ကိုစိတ်ပျက်စရာပျောက်သွားမှာပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်။ သူမကိုမေးမြန်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုအပြင်သို့ထွက်ခြင်း၊ ထိုနေ့၌သွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်သည်တိုးတက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းထက်ငါလုပ်ခဲ့တာထက်ပိုပြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ကြံ့ခိုင်ရေး - ကျွန်ုပ်သည် NoFap ကိုစတင်သောအခါလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်သင့်လျော်သောအစားအစာကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာသောအပြုအမူများနှင့်တွဲဖက်ရန်ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ ငါကအားကစားရုံကိုတစ်ပတ်လျှင် ၂ ဆ၊ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်လျှင် ၃ ဆ၊ တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၁ သုပ်စားရသည်။ အခြားသူများနှင့်ညစာမစားရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများကိုလည်းသတိရှိရှိကန့်သတ်ထားသည်။ ငါ ၁၀-၁၅ ပေါင်ကျသွားတယ်။ ငါအရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပိုအရေးကြီးတာကပိုကောင်းတယ်။
အမျိုးသမီးများ၏အမြင်တိုးတက်မှု - ဤသည်မှာသိမ်မွေ့သော၊ သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ငါသည်အမျိုးသမီးများပိုမိုသတိထားမိလာပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပုံပေါက်နေသည်။ ဒါက porn နည်းနည်းရဲ့တိုက်ရိုက်ရလဒ်လို့ထင်တယ်။ ဒါ့အပြင်ငါ HOCD နဲ့ငါရုန်းကန်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒါကငါဒီနေရာမှာအခြားသူတွေတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါလုံးဝမကြည့်တော့တာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကစစ်မှန်တဲ့ဘ ၀ မှာမိန်းမတွေကိုအများကြီးပိုပြီးသတိထားမိပြီး HOCD နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘူးလို့ငါပြောနိုင်တယ်။ ငါတကယ် porn ဤနည်းအတွက်ငါ့ ဦး နှောက်နှင့်အတူလွဲချော်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်များ / တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု - ကျွန်ုပ်တိုက်ခန်းကိုမကြာခဏသန့်ရှင်းရေးနှင့်သွားများကိုပိုမိုဂရုစိုက်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရတာတကယ်ပျော်တယ်၊ အရင်ကငါတကယ်သတိမရှိခဲ့ဘူး။
တကယ့်မီဒီယာကိုစိတ် ၀ င်စားလာခြင်း - ငါဆိုလိုတာက Netflix မှာရုပ်မြင်သံကြား / မကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်သောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် TED ၏ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုနီးပါးဖတ်ရှုခဲ့သည် ဒါဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့ ... ဒီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်၏တီဗွီအချိန်ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်၏မကြာသေးမီကစောင့်ကြည့်ထားသောစာရင်းအားကြည့်နေစဉ်နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မည်မျှရှိသည်ကိုအနည်းငယ်အံ့အားသင့်မိသည်အထိကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုပင်နှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားခဲ့ပါ။ ငါတောင်မှရံဖန်ရံခါသော်လည်းတောင်ပန်းခြံ၌ dabble ။
အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများအတွက်လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုလျော့နည်းခြင်း - ငါဟာလူမှုရေးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်လူသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းတော့မသက်မသာခံစားခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာမသေချာပေမယ့်အခုတော့ပိုကောင်းလာပါပြီ။ ငါအထူးအံ့သြဖွယ်သောအခြား MEN ပတ်ပတ်လည်အများကြီးပိုအဆင်ပြေကြောင်းဖော်ပြချင်တယ်! ငါ 'beta' ကိုမခံစားတော့တော့ပါ၊ စားပွဲတွင်ထိုင်ခုံလည်းရှိသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု - ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကမပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောစိတ်ငြိမ်သက်မှုအားလုံးရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောသူစိမ်းများ၏ထူးဆန်းသောပုံရိပ်များကိုလက်မခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်၏တရားအားထုတ်ရန်အလေ့အထအသစ်ဟုလည်းမှတ်ယူထားသည်။
တွေးတောဆင်ခြင် - ဤကြီးမားသည်။ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်စိတ်ကိုအခြားမည်သည့်အရာ၌မှမပျောက်စေနိုင်ပါ။ ၅-၁၀ မိနစ်မှမနက် ၅ နာရီမှ ၁၀ မိနစ်အထိကျွန်ုပ်အိပ်ခန်းထဲမှခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ထိုင်။ စိတ်ကိုကြည်လင်စေပြီးသက်ရှိသတ္တဝါ၏ဂုဏ်အသရေကိုသာတန်ဖိုးထားလေးစားသည်။ ဒီတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုတစ်နေ့လုံးယေဘုယျအားဖြင့်လိုက်နာသည်။
သင်ဇီဝဗေဒကိုမဖတ်လိုလျှင်အခန်း ၁ မှစပါ။
NoFap ကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းပြီးအထောက်အကူပြုတဲ့ရပ်ရွာတစ်ခုပါ။ သူကကျွန်တော့်ကိုရှုထောင့်ကူပေးဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုလုပ်နေရတာလဲ ဒါပေမယ့်ဒီကိုလာရတာကိုစိတ်မစွဲမှတ်ပါနဲ့၊ တကယ်လို့မင်းတကယ်လှုံ့ဆော်မှုမလိုအပ်ရင်နေ့တိုင်းမစစ်ဆေးသင့်ဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အဲဒါဟာ 'တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး' ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခံစားရပြီးသင်ထပ်မံဖြစ်ပွားမှာကိုသင်အမြဲစိုးရိမ်နေပါတယ်။ ဒါကဒါမဟုတ်သောအရာပဲ။ အမြဲတမ်းဘဝပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
အဆိုပါပျက်ပြယ်ဖြည့်စွက် - ငါသာ fapstranauts များစွာသောသင်သည်ရှောင်ကြဉ်လျှင်သင်စူပါပါဝါရရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်၏အမှားလုပ်ပုံရသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ဒီအချက်ကိုမယုံဘူး PMO ကိုဖယ်ရှားပြီး၊ ကောင်းမွန်သောစာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းစီမံကိန်းတစ်ခုသို့ကူညီခြင်း၊ စင်္ကာပူသည်စင်္ကာပူသည်သင်၏တံခါးအပြင်ဘက်တွင်နေရောင်ခြည်များစွာရရှိစေသည့်အခါကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်၏ဖျားနာနေသောအလင်းရောင်ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
ဖတ်ပါ၊ ဖတ်ပါ၊ ဖတ်ပါ - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်စေရန်စာအုပ်များထဲသို့ပစ်ချလိုက်ပြီးယခုကျွန်ုပ်သည်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းရိုးသားစွာပြောနိုင်သည်။ တစ်ရက်လျှင်စာမျက်နှာ ၁၀ မျက်နှာသာဖတ်ပါ၊ သင်ရိုက်ထားသောအချိန်တွင်စာအုပ်များနှင့်ဖတ်ပြီးမှသာသင်သိနိုင်သည်။
မစ္စတာ Nice Guy, အဆိုပါသို့အနည်းငယ်ကွေ့ Edge, စဉ်းစားပါနဲ့ချမ်းသာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း, ကိုယ်သင်ရွေးရောဂါအထောက်အထား, Flow, ကငျြ့ကို The Power of (ဒီအုပ်စုအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ) အဘယ်သူမျှမပို။
သင်၏ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်ပါ။ ဟဟား…။ နောက်တာပါ (နောက်ကျပြီ) ။ သင့်ဘဝကိုမည်သို့နေထိုင်သည်ကိုသင်ရွေးချယ်ရန်ယခုပင်သင့်တွင်တန်ခိုးရှိသည်။ မင်းအခုလုပ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုရိုးရိုးသားသားစာရင်းယူပြီးသင့်ကိုနက်ရှိုင်းစွာတူးပြီးသင်တကယ်လိုချင်တာကိုနားလည်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ မင်းနေချင်တဲ့နေရာဘယ်မှာလဲ သင်ဤအပိုင်းကိုရောက်နေလျှင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်၊ သင်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ပါ။ သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုရေးချပါ - ၁ နှစ်၊ ၃ နှစ်၊ ၅ နှစ်အတွင်းသင်မည်သည့်နေရာတွင်တွေ့မြင်ရသနည်း။ မင်းရဲ့ဘယ်အလုပ်မျိုး၊ ဘယ်မြို့မှာသင်နေထိုင်သလဲ၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဘာလဲ၊ သူငယ်ချင်းတွေဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်လောက်ကျန်းမာသန်စွမ်းနေတယ်၊ ​​အချိန်ဖြုန်းနေလဲ။ အခုဆိုရင်သင်ဟာ gameplan တစ်ခုရှိတယ်၊ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အနာဂတ်အခြေအနေတစ်ခု - ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါပြီ။ ယခုတွင်သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်အဆင့်များအဖြစ်သို့ဖြိုဖျက်ရန်လိုအပ်ပြီးကွက်လပ်များကိုဖြည်းဖြည်းဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ထင်ထားခြင်းထက်ခြိမ်းခြောက်မှုနည်းပါးပြီးတကယ်အိပ်မက်မက်ခြင်းသည်တကယ်ပျော်စရာဖြစ်သည်။
စံပြပုဂ္ဂိုလ်ရှာပါ - ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်။ သင်၏ဘဝ၌သင်အတုခိုးချင်သောသူများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ လုံးဝမစုံလင်သော်လည်းအချို့အရည်အသွေးများကြောင့်သင်သူတို့ကိုလေးစားမိသည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်ဤချမှတ်နိုင်ဘူး သင်လုပ်နိုင်သည်! သင့်ရဲ့လူမှုရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းပြောစရာမလိုဘဲရွေးချယ်စရာသမိုင်းမှတ်တမ်းများစွာရှိပါတယ်။ လူတိုင်းတစ်နေရာရာမှာစတင်ခဲ့ပြီးသင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ဥပမာအားဖြင့် Steve Jobs သည်လောကနှင့် iPhone ကို အသုံးပြု၍ လောကကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သူ၏နောက်ခံမှာစွဲမက်ဖွယ်မကောင်းခဲ့ပါ။ သူလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်
အရှုံးမပေးပါနဲ့ - ဒါကစွမ်းအားကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပါ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင်ကျမအတွက်တော့ခက်တယ်။ တခါတရံတကယ့်ကိုတွန်းလှန်ဖို့တကယ့်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာနေတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်၊ လိင်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ ၎င်းသည်တီဗီကြော်ငြာများ၊ ရုပ်ရှင်များတွင်ယခင်ကထက်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပြီး၎င်းတွင်သတင်းမှားများစွာရှိသည်။ သင်ဟာခိုင်မာစွာရပ်တည်ပြီးသင့်အတွက်မှန်ရာကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဘယ်လောက်ဝေးမလဲ
ဤသည် wow စူပါရှည်လျားဖြစ်ထွက်လှည့်။ ငါမျှဝေဖို့အများကြီးရှိခဲ့ပုံပါဘဲ! ငါဒီထွက်ရှိတစ်စုံတစ် ဦး ကကူညီပေးခဲ့သည်မျှော်လင့်ပါတယ် ဤအစီရင်ခံစာများသည်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အမြဲတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုရှေ့ဆက်ပေးရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကိုမေးခွန်းများရှိရန်ကျွန်ုပ်အားဝေငှပါ - ကျွန်ုပ်သည်မြန်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မည်။
အားလုံးပါ ၀ င်ပါ၊ သင်ပထမအဆင့်ကိုလုပ်ပြီးပြီ၊
TL; DR: NoFap မမျှော်လင့်ဘဲသူတို့ထဲကနည်းလမ်းများစွာ, များစွာအတွက်ငါ့အသက်ကိုတိုးတက်ခဲ့သည်။ ငါသူတို့ဘဝကိုပိုမိုလုပ်နေနိုင်ထင်သူမည်သူမဆိုဤအကြံပြုပါသည်။
LINK - 90 ရက် - Hardmode ။ အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ။
NMMNG နှုန်းရုံ MO ကိုဆင်ခြင်အတွက် 100 + ရက်ပေါင်း
ဒီအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေတောင်းခံပါတယ်။ မင်းကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါ fapping မပါဘဲရက်ပေါင်း 100+ သွားပြီ, နှင့်ရလဒ်များကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပါပြီ! ငါသာယာတဲ့, လူမှုရေးအရစိုးရိမ်ပူပန်လျော့နည်းခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိန်ခေါ်မှုမှာကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏သိပ္ပံပညာအရဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်စိုစွတ်သောအိပ်မက်ဆိုးများမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကျန်းမာနည်းလမ်းတွေထဲမှာသင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြ (P မပါဘဲဆိုလိုသည်မှာ fapping) တစ်စိတ်ကူးစာအုပ်နှင့်ငါ၏စွန့်ခွာကိစ္စများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးခဲ့သေးရေးသားသူကျန်းမာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြံပြုထားတဲ့အဘယ်သူမျှမပိုမစ္စတာ Nice Guy ဖတ်ပါ။ စာအုပ်အလိုအရ, ကသငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းဿုံအဆင်ပြေနှင့်သင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအတူမျှဝေနိုင်ရန်ချင်မှသငျခနျးစာယူနိုငျအရာတစ်ခုခုသည်ကိုအသိအမှတ်မပြုကူညီပေးသည်။ ငါသည်ငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူဖြည့်စွက်ရန်ဤလိုအပ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ငါ P. မပါဘဲသတိပြန်ရဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ (၉၀ ရက်ကျော်လွန်ပြီးသူများ) ကသူတို့ဟာ ၉၀ ကျော်လွန်ပြီးကျော်ကြားမှုသည်ထိုက်တန်သည်ဟုမှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါသလား။ ငါ MO ကိုလုပ်လိမ့်မယ်, ငါ့လေ့ကျင့်ခန်း / ကျန်းမာအစားအစာ / တရားအားထုတ်ရန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်မှာကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများဖြင့်မိမိကိုယ်ကို (နှင့်အခြားသူများနှင့်မကြာမီမျှော်လင့်မိလျှင်) ကျန်းမာရေးနှင့်ထိတွေ့ပါက NoFap ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆက်လက်ခံစားရမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ မည်သူမဆိုဤအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်သလား?
ဤအချိန်တွင်တိုက်တွန်းမှုများသည် ထပ်မံ၍ ပိုမိုအားကောင်းလာကြောင်းဖော်ပြသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၄၀-၈၅ မှသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏသုံးသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုနှုန်းသည်အရှိန်မြင့်လာသည်။ t.co/LvpPxCuUM2